Ulithethelela Kanjani Icebo Lokumaketha Ividiyo? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 23, 2014 NgoMsombuluko, Juni 23, 2014 Douglas Karr
Akubona nje ubufakazi bendatshana obusekela ukusetshenziswa kwevidiyo, yisayensi yevidiyo eheha ukunaka nemizwa yombukeli noma obhalisile. Besilokhu sicindezela wonke amaklayenti ethu ukuthi athuthele kwividiyo futhi besikade siwafafaza kuwo wonke amasayithi awo… kusuka kumavidiyo okuchaza umkhiqizo, kuya ekugqwayizeni okuyinkimbinkimbi, kobufakazi bamakhasimende kanye nokwenza ngendlela evamile… amavidiyo aqhubeka nokwandisa ukuzibandakanya nokuguqulwa kuvuliwe amasayithi amaklayenti ethu.
Amavidiyo awanikeli kuphela ukwanda okungu-74% kokuqonda kwezivakashi zakho ngomkhiqizo noma insizakalo yakho uma kuqhathaniswa nezithombe, kodwa futhi kwandisa namathuba okuthi izivakashi zakho zithenge umkhiqizo noma insiza yakho ngama-64%.
Lokhu infographic kusuka kuQuicksprout uhamba ngakho konke okudingayo ukuze uthethelele utshalomali lwakho lokumaketha kuvidiyo. Amavidiyo awasekho ukutshalwa kwezimali kwamadijithi ama-5, noma! Akujwayelekile ukuthi ube nevidiyo ekhiqizwe kahle, engaphansi kakhulu kwe- $ 10k - ngisho nama-voiceovers ne-animation.
Tags: ukulungiswa kwezindlekoAmavidiyo Wokumakethaokungabalulekileividiyo nge-imeyiliukukhangisa kwevidiyoimiphumela yokuthengisa ividiyo